आर्यन सिग्देल ‘स्टार कि कलाकार’ ? – khabarxpress.com
कला २०७४, २६ आश्विन बिहीबार ०५:५८
आर्यन सिग्देल ‘स्टार कि कलाकार’ ?
नायक आर्यन सिग्देलले थुप्रै हिट चलचित्र दिए । कुनै समय आर्यनकै लागि निर्माताले ६ देखि ८ लाखसम्म उनको पारिश्रमिकमा खर्चिए । आर्यनले पनि निर्माताले जति माग्यो त्यती रकम दिन थालेपछि मनलाग्दी चलचित्र खेलिदिए ।
अहिले उनको स्टारडम निकै तल झरेको छ । केही बर्ष अगाडिसम्म त आर्यनलाइ नेपालकै नम्बर १ नायकको रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, स्टारडम खस्किदै गएपछि भने चकलेटी हिरोले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
आर्यनले आफू कहिल्यै पनि स्टार नभएको सुनाएका छन् । स्टारडम खस्किएको बिषयमा कुरा गर्दै आर्यनले मिडियासँग भने-‘मैले कहिल्यै पनि आफूलाई स्टार भनिनँ । म एउटा कलाकार हुँ ।’ आर्यनले आफूले सधै चलचित्र राम्रो बनोस् र चलचित्र क्षेत्र उभो लागोस् भनेर काम गरेको समेत स्पष्ट पारे ।
आर्यनले हलमा एक जना दर्शक आएर आफ्नो चलचित्र हेरुन्जेलसम्म चलचित्रमा काम गर्ने सुनाए । अहिले आर्यनलाई हेर्न हलमा दर्शकको उपस्थिती कमजोर बन्दै गएको छ । कुनै समय आफूलाई नेपालको नम्बर १ नायक भन्दै चर्को पारिश्रमिक लिएका आर्यन अहिले स्टारडम कमजोर भएपछि आफू कलाकार मात्र भएको बताइरहेका छन् ।
More in कला
“भद्रगोल” नयाँ आयो जिग्री-पाँडे आक्रोसित, अदालत जाने तयारी
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित भईरहेको टेलिश्रृङखला भद्रगोलमा हिजोबाट नयाँ टिम आएका छन्। जिग्री-पाँडे सहितको पुरानो टिमले एक्कासी भद्रगोल रोकेपछि मिडिया हबले नयाँ...
khabarxpress२०७६, २२ भाद्र आईतवार १३:५६
२०लाख लिने नायिकाले ५०लाखको दर्शक तान्नुपर्छ’ : वाह सलाम छ स्वस्तिमाजी भिडियो हेर्नुहोस्
नायिका स्वस्तिमाले एक कार्यक्रममा नायिका पूजा शर्मालाई लछित गरी हालै उनले नयाँ फिल्मको लागि २० लाख पारिश्रमिक लिएको हल्लालाई खरो जबाफ...
khabarxpress२०७६, १० श्रावण शुक्रबार १७:१७
गायिका ऋतु कँडेलको तीज गीत “रे पटक भरर” आयो
गायिका ऋतु कँडेलको तीज गीत “रे पटक भरर” युटुबबाट रिलीज भएकोछ । स्टेजहरुमा आफ्नो बेग्लै प्रस्तुतिहरु दिँदै आएकी ऋतुले गायन क्षेत्रमा...
khabarxpress२०७६, ९ श्रावण बिहीबार २३:०३